မျက်ရည်ခိုင်မှသာ ဖတ်ပါ ။ – Alinyaung
မျက်ရည်ခိုင်မှသာ ဖတ်ပါ ။
December 16, 2017 ErhekjqGPBzWQaQNQM ကြားသိရသမျှ 0
အဖေဖြစ်သူက ကျောင်းကို လာပါတယ် ။ ကူလီသမားတစ်ယောက် မို့ အဖေအဝတ်စားတွေမှာ
မီးသွေးတွေ ပေကျံ့နေတာပေါ့ ။
” သမီး ဟိုမှာ . . ကျောင်းမှာ ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရောက်စောင့် နေတာ ။ သမီးရဲ့ အဖေမှတ်လား . . ”
ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ တကယ်ပဲ အဖေဖြစ်နေသည် ။ ” ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမ သမီးအဖေပါ ”
ဘေးနားက သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းပြီး ” ဟဲ့ ဟေမန် အဖေကလည်း ကြည့်ပါအုံး ညစ်ပတ်နေလိုက်တာ . . ”
” အေးလေ ဟယ် ။ အင်္ကျီမှာလည်း အသစ်ရွက်တွေပေကျံ့နေတယ် ။ ကြည့်ရတာ ကုန်ထမ်းပြီး ရောက်လျတာထင်တယ် ။ ”
” ဒါဆို ဟေမန်အဖေ က ကူလီသမားပေါ့နော် ” သူတို့တွေ တီးတိုးတီးတိုးပြောနေတဲ့ စကားသံကို ကြားရင် ရှက်လည်း ရှက်မိ သိမ်လည်း သိမ်ငယ်မိသလိုခံစားရမိသည် ။ ~
အဲဒါ နဲ့ အပြင်ထွက်သွားခဲ့သည် ။ ဆယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ အဖေက ရောက်လာတာကိုး . . .
သမီးလေး ထွက်လာတာ မြင်တော့ သမီးလေးမျက်နှာကြည်ပြီး ပြုံးနေမိသည် ။ မောင်မိုးလင်း တစ်ယောက် ။ တစ်မနက်ပင်ပန်းနေထားသမျှကိုတောင်ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ပါဘူး ။
သမီးဖြစ်သူက – ”အဖေ ဘာလို့ ကျောင်းရှေ့ရောက်လာတာလဲ ”
” အော် သမီးကို မုန့်ဖိုးလာပေးတာပါ ။
မနက်က ပိုက်ဆံမရှိလို့ သမီးကို မုန့်ဖိုးမပေးလိုက် ဘူးလေ . . ရော့ရော့ဒီမှာ ပိုက်ဆံ ”
အဖေဖြစ်သူက ကုန်ထမ်းရင်း ရလာခဲ့တဲ့ တစ်ထောင်တန်သုံးရွက်ထဲက တစ်ရွက်ကို ယူပြီး ပေးလိုက်သည် ။
သမီးက တစ်ထောင်တန်ပြဲနေလို့ ” အဖေ သမီးကို ဒါလေး နှင့် လှဲပေးပါလား ။
ဒီတစ်ထောင်တန်က ပြဲနေတယ် ။ တော်ကြာ ဝယ်စားလို့ မရမှာစိုးလို့ ”
အဖေဖြစ်သူကလည်း တစ်ထောင်တန် တိတ်ကပ်ထားတာလေးကို ပြန်ယူပြီး အသစ်ချွတ်ချွတ်လေးကို လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည် ။
သူများတွေ ဝိုင်းကြည့်နေတာ ကြောက်တယ့် ကျွန်မ ။အပျိုဖော်ဝင်ကာစ ဆိုတော့ ရှက်တတ်တယ်လေ ။အဖေက နောက်ပြီး အင်္ကျီက ပြဲစုတ်နေတယ် ။
ပုဆိုးကလည်း ပြဲနေတယ် ။ အဖေနှင့် ကျွန်မကို လူတွေအမြင်မှာ တစ်မျိုးမြင်မှာ စိုးရိမ်တာနဲ့
” အဖေ အမြန်ပြန်တော့နော် . . တော်ကြာ သမီးသူငယ်ချင်းတွေ သွားရင် သမီးကို လှောင်ပြောင်ပြီး စနေကြအုံးမယ်”
” အော်အေး အေး . .အဖေ နားလည်ပါပြီကွယ် . . ”
” သမီး အထဲဝင်တော့လေ . .အဖေ ဒီမှာ ခဏရပ်ပြီးရင်ပြန်ပါ့မယ် ”
” အဖေရယ် ပြန်လိုက်ပါတော့နော် . .ဒီမှာ အကြာကြီးဆက်ရပ်နေရင် မကောင်းဘူးနော် ” ရှက်လွန်းတဲ့ ကျွန်မ အဖေကို နှင်ထုတ်နေမိသည် ။
”အေးပါကွယ် . .အေးပါ ”အဖေ ကျောခိုင်းပြီး လှည့်ကာ ထွက်သွားသည် ။
အဖေက သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ ကုန်ထမ်းတာလေ ။
တစ်ခါတစ်လေ ၅ထောင်ရတဲ့ နေ့လည်း ရှိသလို ။
သုံးထောင် ရတဲ့ နေ့လည်းရှိတယ် ။
တစ်ခါတစ်လေ ၈၀၀၀ထောင်ရတာ ရှိပါတယ်။
သမီးတို့ အမေတို့ အိမ်မှာ ကျောင်းမှာနေတဲ့ အချိန်အဖေ က နေပူကြဲကြဲထဲမှာ ဆိုက်ကားပေါ်က ကုန်တွေကိုမ ရင်းထမ်းရင်း သယ်ပိုးနေတယ် ။ ချွေးတွေ တပြိုင်းပြိုင်းလည်း ကျ ပေါ့ရှင့် ။
ညရောက်တော့ သမီးက အမေ့ကို အဖေအားပြောခိုင်းတယ်။
သမီးဖြစ်သူ အိပ်သွားတော့ မိန်းမက ယောကျာ်းကို ပြောလေသည် ။
” ယောကျာ်း ရှင်ညောင်းနေတာလား ”
” အေးကွာ . .ဒီနေ့ နည်းနည်း အကြော်တတ်နေတယ်။”
” ဓံကြေလိမ်းဆေး လိမ်းမလား။ ကျွန်မလိမ်းပေးမယ်လေ”
” အေးကောင်းတာပေါ့ကွာ . . ဒါမှ အကြောပြေမှာ ”
” ပြီးရော ”
ဆေးလိမ်းပြီးရင်း ပြောလေသည် ။
ယောကျာ်း . .
” အေး ပြောလေ ”
” ရှင် မနက်က သမီးလေးဆီကို သွားတယ်ဆို ”
” အေးဟုတ်တယ်လေ ငါမုန့်ဖိုးသွားပေးတာ ”
” ဘာလို့ သွားရတာလဲရှင် ”
” အော် မင်းကလည်းကွာ . ငါ့သမီး ကျောင်းဘဲ
ငါသွားတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ”
” ဘာဖြစ်ရမှာလဲ . .သမီးလေးက ကျွန်မကိုပြောတယ်။
ရှင်ကို ကျောင်းမလာခိုင်းနဲ့ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင့်ကို သူသူငယ်ချင်းတွေမြင်သွားရင် လှောင်ပြောင်မှာ
စိုးလို့တဲ့ ။ နောက်ပြီး ဆရာ . .ဆရာမတွေကပါ အထင်သေးသွားလိမ့်မယ် . .
ဒါကြောင့် မုန့်ဖိုးပေးစရာရှိရင် တစ်ခါတည်း ကျောင်းသွားတာနဲ့ ပေးလိုက် ။
မဟုတ်ရင်လည်း ကျွန်မ သွားပေးပေးမယ် ။
ရှင်တော့ မသွားပါနဲ့နော် ”
ယောကျာ်းဖြစ်သူက ခဏတာ ငြိမ်သက်ကျသွားသည် ။
ဘာဖြစ်မှန်း မသိ ။ မျက်ရည်တွေ ဝိုင်းလာပြီး ။
မကျမိအောင် ထိန်းကာ ။
” အေးပါကွာ . . အေးပါ ။ ငါဆင်ခြင်ပါ့မယ် ။”
” ဘာလဲ ရှင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာလား ”
” မဖြစ်ပါဘူး ။ ငါရင်ထဲ နည်းနည်းမကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါနားလည်ပါတယ် ။
သမီးလေးလည်း ရှက်မှာပေါ့ ။ သူလည်း ရှက်တတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်နေပြီဘဲ ။ နောက်ပြီး ငါကလည်း ကူလီသမားကို ။ အေးပါကွာ နောက်တစ်ခါ မုန့်ဖိုးသွားပေးစရာရှိရငိ မင်းပဲ သွားပေးလိုက်ပါ ” . .
” အော် . . မိန်းမ ”
” အင်း ပြောလေ ငါစုနေကြ စုဗူးလေး သွားယူလာခဲ့ ”
” အင်း ” ပြောကာ ထသွားသည် ။ အတန်ငယ်ကြာတော့ ဖိုးဝရုပ် စုဗူးလေး ယူဆောင်လာသည် ။
ဒီစုဗူလေးက ယောကျာ်းဖြစ်သူ အမြဲတမ်း ထည့်ထည့်ပြီးစုနေတာ ။ ဘာစု ဗူးမှန်းလည်း မသိ ။ မေးတော့လည်းမိန်းမ ဖြစ်တဲ့ သူကိုယ်တောင် မပြောဘူး ။
သူက မေးတိုင်း ဘာပြောလဲဆိုတော့ အဲဒီစုဗူးဖောက်တဲ့နေ့ကျရင် မင်းသိလိမ့်မယ် တဲ့ ။ ဒါပဲ ပြောတယ် ။
အခုလည်း မိန်းမကမေးပြန်တယ် ။
” ယောကျာ်း ရှင် ဒီစုဗူးထဲကို တစ်နေ့နေ့ ပိုက်ဆံတွေထည့်နေတယ်နော် . .’
” အေးလေ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ”
” ကျွန်မ နားမလည်လို့ တစ်ခုမေးမယ် ။
ရှင် အဲဒီစုဗူးထဲကို ပိုက်ဆံတွေ အကုန် ထည့်မယ်အစား တစ်နေ့နေ့ နည်းနည်းချင်းစီဘဲ ထည့်ပါလား ။
ပိုတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကိုတော့ ရှင် . . .
အဝတ်စားဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ဝတ်ပါလား ။ အဲဒါဆိုရင် အဲဒီအဝတ်စားသစ်နဲ့ ရှင်သမီးလေး ဆီသွားလို့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား ”
” မဟုတ်ဘူး ။ ငါ ဖယ်လည်းမဖယ်ဘူး ။
ဒီစုဗူးထဲကို ထည့်ရတာကလည်း အကြောင်းရှိတယ် ။
တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် ငါဒီစုဗူးထဲထည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို မင်းသိလိမ့်မယ် ”
” ရှင် က လျှို့ဝှက်လွန်းတယ် ။ ကျွန်မတောင် မပြောပြဘူးနော် ”
” ဒါကတော့ကွာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လျှိုဝှက်ချက်ဆ်ိုတာရှိရတယ်လေ ။ အဲဒီလျှိုဝှက်ချက်ကိုလည်း ဘယ်သူမှပေးမသိရဘူး ။ ဒါမှ လျှိုဝှက်ချက်ခေါ်တာ ။ ”
” ဟုတ်ပါပြီ ရှင် . . ဟုတ်ပါပြီ ”
အဖေက အမြဲတမ်း မိသားစု ရှေ့မှာ ပြုံးသည် ။
အဖေ့ကို ကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ပင်ပန်းစရာမရှိသလိုပဲ ။ နောက်ပြီး ထူးဆန်းတာက ဖေဖေဟာ
ဘယ်တော့မှ နေထိုင်မကောင်းဘူးဆိုတာ မရှိသလိုဘဲ။
အမြဲတမ်း အလုပ်ပဲ လုပ်နေတယ် ။ နေပူကြဲကြဲထဲမှာ ။
မိုးရာသီ ဆိုရင်လည်း မိုးရေတွေထဲမှာ ။ ဆောင်းရာသီဆိုရင်လည်း အေအေးချမ်းချမ်း ခိုက်ခိုက်တုန်နေတဲ့ အချိန်မှာ အင်္ကျီစွပ်ကျွယ် အဖြူ လက်ပြတ်နှင့်အမြဲ အလုပ်လုပ်နေတတ်တယ် ။
တစ်နေ့ ကျွန်မ အိမ်ပြန်လာရင်း လမ်းမှာစဉ်းစားမိသည်။
” ငါတောင် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးပြီဘဲ ။
အဖေနှင့် စကားမပြောရတာ ။ လျှောက်မသွားရတာ အတော်ကြာပြီ ။ အမေနှင့်ကတော့ တွှေုဖြစ်တယ် ။
စကားပြောဖြစ်တယ် ။ အဖေကတော့ ငါအိပ်မှ အိမ်ပြန်လာတယ် ။ ဒီနေ့ကစပြီး အဖေ့ကို ငါကောင်းကောင်းစကားပြောလို့ရပြီ ။ လျှောက်သွားမယ်။ လျှောက်လည်မယ် ” အတွေးဖြင့် အိမ်ရောက်လာတော့ အမေက င်ိုနေသည် ။ တရှိုက်ရှိုက်နဲ့ကို ။
” အမေ . . အမေ ဘာဖြစ်တာလဲ ။
အမေ ဘာလိုငိုနေတာလဲ ”
” သမီး . . ညဉ်း . .ညဉ်း အဖေ ကားတ်ိုက်ခံရပြီးဆုံးပြီ ။ ”
” ရှင် ! ” ကျွန်မနားထဲမှာ အဖေဆိုတာ ဆုံးပြီးစကားလုံးဝ မယုံနိုင်ဘူး ။ အဖေက ကားတိုက်ခံရတာ ။ မူးပြီးလှဲကျတာတဲ့ ။ လမ်းမမှာ မူးပြီးလှဲတုန်းက ကားတွေတက်ကြိတ်လို့ ။ အပိုင်းပိုင်း ဖြစ်သွားပြီတဲ့ ။ ကံဆိုးလိုက်တဲ့ ကျွန်မတို့ အဖေ။
ညရောက်တော့ အမေ က ပစ်တိုင်းထောင် ဖိုးဝရုပ် အရုပ်လေးကို ယူလာသည် ။ အမေကပြောတယ် ။
” သမီး နင့်အဖေက ဟော့ဒီ အရုပ်လေးကို ညတ်ိုင်း
ပိုက်ဆံလေးတွေ ထည့်ထည့်ပေးတယ် ။
အဲဒီအရုပ်လေးကို တယုတယ သူမြတ်နိုးတယ် ။
ဒီထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာတောင် သူကလွဲပြီး အမေကိုယ့်တောင် မပြောပြဘူး ။ အခု ဒီထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာ အမေတို့ တွေ ဖောက်ကြည့်ရအောင် ”
ခွမ်းခနဲ ခွဲပစ်လိုက်သည် ။ ကျွန်မက စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေမိသည် ။ပစ်တိုင်းထောင် အရုပ်လေးကွဲသွားတော့ အထဲထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးဘဲ . .နောက်ပြီး စာတစ်စောင်ပါတွှေုတယ် ။ စာတစ်စောင်ကို အမေက ကောက်ကာငင်ကာ ယူဖတ်လိုက်သည် ။
အိုစာဖတ်လိုက်တာနဲ့ မေမေ့ မျက်ဝန်းတွေ မဟားတအားစိုလာပြီး စာတောင်ဆက်မဖတ်နိုင်တော့ဘူး ။ ငိုကြီးချက်မဖြင့် ငိုချတော့သည် ။ အမေ့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မလည်း လန့်ထိတ်ကာ လက်ထဲကစာကို ဆွဲယူပြီး ဖတ်လိုက်သည် ။
” သမီး . . အဖေ သမီးကို ချစ်တယ် ။ အရမ်းချစ်တယ်။
အရမ်းချစ်လို့လည်း ငွေတွေစုထားတယ် ။
အဲဒီငွေတွေကဟော့ဒီက ငါ့သမီးလေး တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ် ။ လက်ထပ်တဲ့ အချိန်ကျရင် သုံးဖို့ပါ ။
အဖေ့လို ကူလီသမားတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် သမီးလေးအတွက် အရှက်ရစေမှာ အဖေသိပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ဖေဖေ အဲဒီမင်္ဂလာပွဲကို မတက်ရောက်တော့ဘူး
သမီး ။ မမြင်ကွယ်ရာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကဘဲ ဝမ်းသာပီတိနဲ့ အဖေ လက်ခုပ်တီးနေမှာပါ ။ အဖေမျက်ရည်တွေဖြင့် ပြုံးပြီး ကျေနပ်နေမှာပါကွယ် ။
ဖေဖေလို လူရာမဝင်တဲ့ အဖေ့ ဘယ်မှာလဲလို့ သားရှင် ဘက်က မေးလာရင် ။
ဖေဖေဟာ အစကကြီးတည်းက သေသွားခဲ့ပါပြီးလို့ ပြောလိုက်ပါကွယ် ။
ဖေဖေ နားလည်ပါတယ် ။ ဖေဖေဟာ ကူလီသမားတစ်ယောက် ပညာမတတ်။ စာမတတ် ။
ငါသမီးလေးလို ရုပ်ချော ပညာတတ် လေးရဲ့ အဖေဖြစ်ဖို့ မထိုက်တန်ဘူး ။ သမီးလေးကို လည်း အရှက်မရစေချင်ပါဘူး ။ ဖေဖေဟာဆိုရင်ဖြင့် အဖေလို့ မခေါ်ထိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ ။ အဖေ့ကြောင့် ငါ့သမီးလေး အရှက်ရ
မှာ အဖေမလိုလားဘူး။ ဒါကြောင့် အဖေပိုက်ဆံတွေထားခဲ့မယ်နော် ။ နောက်ပြီး ဒီစုဗူးလေး ဖောက်တဲ့ အဲအချိန်ဟာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပ ဖို့ တစ်ရက်အလိုဆိုတာဖေဖေသိတယ် ။ အဖေလည်း ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ။
သမီးလေး မမြင်ကွယ်ရာတစ်နေရာသွားပြီး သွားရှောင်နေမှာပါ ။ သမီးကို ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် ဖေဖေ ”
စာဆုံးသွားတော့ မျက်ရည်တွေဟာ မဖိတ်ခေါ်ဘဲပါးပေါ်သို့ စီးကျလာသည် ။ အဖေရဲ့မေတ္တာကို ခံစားရင်းအသံတောင် မထွက်နိုင်လောက်အောင် သမီးဖြစ်သူကတရှိုက်ရှိုက်ငိုနေမိသည် ။
ဖေဖေ့ကို ကျောင်းမလာခိုင်းတဲ့ ကျွန်မ ။ ကျောင်းလာရင်အရှက်ရပါတယ်တဲ့ ။ ပင်ပင်ပန်းပန်း နေပူကြဲထဲထီးမဆောင်း ဘာမဆောင်းဖြင့် တကူတကမုန့်ဖိုးလာပေးတဲ့ ဖေဖေ့က်ို မှ ကျွန်မ ဟာ အင်မတန်မှမိုက်မဲလွန်းလှစွာဖြင့် နှင်ထုတ်ခဲ့မိတယ် ။ နောင်တရပါတယ် ။ အရမ်းကို နောင်တရပါတယ် ။ ဘာ ။ တစ်ထောင်တန်က စုတ်နေလို့ စားလို့ မရမှာစိုးလို့ လဲခိုင်းခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ။ အချိန်တိုင်း အားရင် အလုပ်ပတ်တကုတ်ကုတ်လုပ်နေရတာလဲ သိပြီ ။ ဘာလို့ နေမကောင်းရင် နေကောင်းပါတယ်ဆိုတာလည်း သိပြီ။
ရာသီတွေအလီလီပြောင်းသွားလည်း မပင်မပန်း အလုပ်တွေ လုပ်တာလည်း သိပြီ ။ တစ်နေ့လုံးညောင်းနေရတာ ဘာကြောင့်လဲ အခုသိပြီ ။ ဖေဖေ့မှာ ဝတ်စရာမရှိတာ အခုသိပြီ ။ အင်္ကျီသစ်တစ်စုံတောင် မဝယ်ဘဲနေခဲ့တာ ရင်ထုနာလိုက်တာရှင် ။ ငါ့အတွက် ။ ငါ့အတွက်အရာအားလုံးကို သူ့သမီးဖြစ်တဲ့ ငါ့အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့တာပါလား ။ ဖေဖေရယ် တောင်းပန်ပါတယ် ။ အစက အဲလိုမှန်း မသိလို့ ပြောမိတာပါ ။
ဖေဖေဟာ အဖေခေါ်ထိုက်တဲ့ ဖခင်ကောင်တစ်ယောက်ပါလောကမှာ ဖခင်တွေရဲ့မေတ္တာဟာ အပြင်ပန်းဝတ္ထုတွေထက်သာပါတယ်ဆိုတာ အခု သမီးကောင်းကောင်းသိလိုက်ရပါပြီ ။ သမီးလိုက်ရတဲ့ အချိန်ကလည်း အရမ်းနောက်ကျသွားပြီ ။ စောစောသိခဲ့ရင် ဖေဖေ ကျောင်းလာတာလည်း မငြူစူတော့ဘူး ။ ဒါငါ့အဖေလို့လည်း အများမြင်မှာ အော်ပြောရမှာလည်း မရှက်တော့ဘူး ။
ဖေဖေကို နှင်းပေးဖို့ နှိပ်ပေးဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ။
ဖေဖေ့ရဲ့ စုတ်ပြတ်သက်တဲ့ အင်္ကျီလေးတွေ ရွှေထည်တွေထက် တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာ သမီးသိလိုက်ရပြီ ။
ဖေဖေ ကို ပိုင်ဆိုင်ရတာဟာ လောကမှာ အကြီးမားဆုံးသော ဆုလာဘ်ကြီးတစ်ခုဆိုတာ သမီးကောင်းကောင်းသိလိုက်ပါပြီဆိုကာ ။ ငိုသံပါပါ လှိုက်လှိုက်ဝဲဝဲဖြင့် ” အဖေ ” လို့ အကျယ်အော်ခေါ်လိုက်မိပါတော့သည် ။
Message. . ** ဖခင်ဆိုတာ သားသမီးတွေကို ချစ်ပါ
သည် ။ သို့သော် ထုတ်မချစ်ပြတတ်
အသက်တောင် ပေးဖို့ ဝန်မလေးဘူး။
ထားတာကို စဉ်းစားပြီး လုပ်ပေးထား
အဖဖွေဈသူက ကြောငျးကို လာပါတယျ ။ ကူလီသမားတဈယောကျ မို့ အဖအေဝတျစားတှမှော
မီးသှေးတှေ ပကြေံ့နတောပေါ့ ။
” သမီး ဟိုမှာ . . ကြောငျးမှာ ရှမှေ့ာ မတျတပျရောကျစောငျ့ နတော ။ သမီးရဲ့ အဖမှေတျလား . . ”
ကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါ တကယျပဲ အဖဖွေဈနသေညျ ။ ” ဟုတျပါတယျ ဆရာမ သမီးအဖပေါ ”
ဘေးနားက သူငယျခငျြးတှကေ ဝိုငျးပွီး ” ဟဲ့ ဟမေနျ အဖကေလညျး ကွညျ့ပါအုံး ညဈပတျနလေိုကျတာ . . ”
” အေးလေ ဟယျ ။ အကငြ်ျီမှာလညျး အသဈရှကျတှပေကြေံ့နတေယျ ။ ကွညျ့ရတာ ကုနျထမျးပွီး ရောကျလတြာထငျတယျ ။ ”
အဲဒါ နဲ့ အပွငျထှကျသှားခဲ့သညျ ။ ဆယျတနျးကြောငျးသူကြောငျးသားတှေ မုနျ့စားဆငျးခြိနျမှာ အဖကေ ရောကျလာတာကိုး . . .
သမီးလေး ထှကျလာတာ မွငျတော့ သမီးလေးမကျြနှာကွညျပွီး ပွုံးနမေိသညျ ။ မောငျမိုးလငျး တဈယောကျ ။ တဈမနကျပငျပနျးနထေားသမြှကိုတောငျဘယျရောကျသှားမှနျး မသိတော့ပါဘူး ။
သမီးဖွဈသူက – ”အဖေ ဘာလို့ ကြောငျးရှရေ့ောကျလာတာလဲ ”
” အျော သမီးကို မုနျ့ဖိုးလာပေးတာပါ ။
မနကျက ပိုကျဆံမရှိလို့ သမီးကို မုနျ့ဖိုးမပေးလိုကျ ဘူးလေ . . ရော့ရော့ဒီမှာ ပိုကျဆံ ”
အဖဖွေဈသူက ကုနျထမျးရငျး ရလာခဲ့တဲ့ တဈထောငျတနျသုံးရှကျထဲက တဈရှကျကို ယူပွီး ပေးလိုကျသညျ ။
သမီးက တဈထောငျတနျပွဲနလေို့ ” အဖေ သမီးကို ဒါလေး နှငျ့ လှဲပေးပါလား ။
ဒီတဈထောငျတနျက ပွဲနတေယျ ။ တျောကွာ ဝယျစားလို့ မရမှာစိုးလို့ ”
အဖဖွေဈသူကလညျး တဈထောငျတနျ တိတျကပျထားတာလေးကို ပွနျယူပွီး အသဈခြှတျခြှတျလေးကို လကျထဲထညျ့ပေးလိုကျသညျ ။
သူမြားတှေ ဝိုငျးကွညျ့နတော ကွောကျတယျ့ ကြှနျမ ။အပြိုဖျောဝငျကာစ ဆိုတော့ ရှကျတတျတယျလေ ။အဖကေ နောကျပွီး အကငြ်ျီက ပွဲစုတျနတေယျ ။
ပုဆိုးကလညျး ပွဲနတေယျ ။ အဖနှေငျ့ ကြှနျမကို လူတှအေမွငျမှာ တဈမြိုးမွငျမှာ စိုးရိမျတာနဲ့
” အဖေ အမွနျပွနျတော့နျော . . တျောကွာ သမီးသူငယျခငျြးတှေ သှားရငျ သမီးကို လှောငျပွောငျပွီး စနကွေအုံးမယျ”
” အျောအေး အေး . .အဖေ နားလညျပါပွီကှယျ . . ”
” သမီး အထဲဝငျတော့လေ . .အဖေ ဒီမှာ ခဏရပျပွီးရငျပွနျပါ့မယျ ”
” အဖရေယျ ပွနျလိုကျပါတော့နျော . .ဒီမှာ အကွာကွီးဆကျရပျနရေငျ မကောငျးဘူးနျော ” ရှကျလှနျးတဲ့ ကြှနျမ အဖကေို နှငျထုတျနမေိသညျ ။
”အေးပါကှယျ . .အေးပါ ”အဖေ ကြောခိုငျးပွီး လှညျ့ကာ ထှကျသှားသညျ ။
အဖကေ သီရိမင်ျဂလာစြေးမှာ ကုနျထမျးတာလေ ။
တဈခါတဈလေ ၅ထောငျရတဲ့ နလေ့ညျး ရှိသလို ။
သုံးထောငျ ရတဲ့ နလေ့ညျးရှိတယျ ။
တဈခါတဈလေ ၈၀၀၀ထောငျရတာ ရှိပါတယျ။
သမီးတို့ အမတေို့ အိမျမှာ ကြောငျးမှာနတေဲ့ အခြိနျအဖေ က နပေူကွဲကွဲထဲမှာ ဆိုကျကားပျေါက ကုနျတှကေိုမ ရငျးထမျးရငျး သယျပိုးနတေယျ ။ ခြှေးတှေ တပွိုငျးပွိုငျးလညျး ကြ ပေါ့ရှငျ့ ။
ညရောကျတော့ သမီးက အမကေို့ အဖအေားပွောခိုငျးတယျ။
သမီးဖွဈသူ အိပျသှားတော့ မိနျးမက ယောကျြားကို ပွောလသေညျ ။
” အေးကှာ . .ဒီနေ့ နညျးနညျး အကွျောတတျနတေယျ။”
” ဓံကွလေိမျးဆေး လိမျးမလား။ ကြှနျမလိမျးပေးမယျလေ”
” အေးကောငျးတာပေါ့ကှာ . . ဒါမှ အကွောပွမှော ”
” ပွီးရော ”
ဆေးလိမျးပွီးရငျး ပွောလသေညျ ။
” အေး ပွောလေ ”
” ရှငျ မနကျက သမီးလေးဆီကို သှားတယျဆို ”
” အေးဟုတျတယျလေ ငါမုနျ့ဖိုးသှားပေးတာ ”
” ဘာလို့ သှားရတာလဲရှငျ ”
” အျော မငျးကလညျးကှာ . ငါ့သမီး ကြောငျးဘဲ
ငါသှားတာ ဘာဖွဈလို့လဲ ”
” ဘာဖွဈရမှာလဲ . .သမီးလေးက ကြှနျမကိုပွောတယျ။
ရှငျကို ကြောငျးမလာခိုငျးနဲ့ ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ရှငျ့ကို သူသူငယျခငျြးတှမွေငျသှားရငျ လှောငျပွောငျမှာ
စိုးလို့တဲ့ ။ နောကျပွီး ဆရာ . .ဆရာမတှကေပါ အထငျသေးသှားလိမျ့မယျ . .
ဒါကွောငျ့ မုနျ့ဖိုးပေးစရာရှိရငျ တဈခါတညျး ကြောငျးသှားတာနဲ့ ပေးလိုကျ ။
မဟုတျရငျလညျး ကြှနျမ သှားပေးပေးမယျ ။
ရှငျတော့ မသှားပါနဲ့နျော ”
ယောကျြားဖွဈသူက ခဏတာ ငွိမျသကျကသြှားသညျ ။
ဘာဖွဈမှနျး မသိ ။ မကျြရညျတှေ ဝိုငျးလာပွီး ။
မကမြိအောငျ ထိနျးကာ ။
” အေးပါကှာ . . အေးပါ ။ ငါဆငျခွငျပါ့မယျ ။”
” မဖွဈပါဘူး ။ ငါရငျထဲ နညျးနညျးမကောငျး ဖွဈသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငါနားလညျပါတယျ ။
သမီးလေးလညျး ရှကျမှာပေါ့ ။ သူလညျး ရှကျတတျတဲ့ အရှယျရောကျနပွေီဘဲ ။ နောကျပွီး ငါကလညျး ကူလီသမားကို ။ အေးပါကှာ နောကျတဈခါ မုနျ့ဖိုးသှားပေးစရာရှိရငိ မငျးပဲ သှားပေးလိုကျပါ ” . .
” အျော . . မိနျးမ ”
” အငျး ပွောလေ ငါစုနကွေ စုဗူးလေး သှားယူလာခဲ့ ”
” အငျး ” ပွောကာ ထသှားသညျ ။ အတနျငယျကွာတော့ ဖိုးဝရုပျ စုဗူးလေး ယူဆောငျလာသညျ ။
ဒီစုဗူလေးက ယောကျြားဖွဈသူ အမွဲတမျး ထညျ့ထညျ့ပွီးစုနတော ။ ဘာစု ဗူးမှနျးလညျး မသိ ။ မေးတော့လညျးမိနျးမ ဖွဈတဲ့ သူကိုယျတောငျ မပွောဘူး ။
သူက မေးတိုငျး ဘာပွောလဲဆိုတော့ အဲဒီစုဗူးဖောကျတဲ့နကေ့ရြငျ မငျးသိလိမျ့မယျ တဲ့ ။ ဒါပဲ ပွောတယျ ။
” ယောကြာျး ရှငျ ဒီစုဗူးထဲကို တဈနနေ့ေ့ ပိုကျဆံတှထေညျ့နတေယျနျော . .’
” အေးလေ အဲဒါ ဘာဖွဈလို့လဲ ”
” ကြှနျမ နားမလညျလို့ တဈခုမေးမယျ ။
ရှငျ အဲဒီစုဗူးထဲကို ပိုကျဆံတှေ အကုနျ ထညျ့မယျအစား တဈနနေ့ေ့ နညျးနညျးခငျြးစီဘဲ ထညျ့ပါလား ။
အဝတျစားဖွဈဖွဈ ဝယျဝတျပါလား ။ အဲဒါဆိုရငျ အဲဒီအဝတျစားသဈနဲ့ ရှငျသမီးလေး ဆီသှားလို့ရတာပေါ့မဟုတျဘူးလား ”
” မဟုတျဘူး ။ ငါ ဖယျလညျးမဖယျဘူး ။
ဒီစုဗူးထဲကို ထညျ့ရတာကလညျး အကွောငျးရှိတယျ ။
တဈနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျကရြငျ ငါဒီစုဗူးထဲထညျ့ရတဲ့ရညျရှယျခကျြကို မငျးသိလိမျ့မယျ ”
” ဒါကတော့ကှာ လူတဈယောကျရဲ့ လြှိုဝှကျခကျြဆျိုတာရှိရတယျလေ ။ အဲဒီလြှိုဝှကျခကျြကိုလညျး ဘယျသူမှပေးမသိရဘူး ။ ဒါမှ လြှိုဝှကျခကျြချေါတာ ။ ”
” ဟုတျပါပွီ ရှငျ . . ဟုတျပါပွီ ”
အဖကေ အမွဲတမျး မိသားစု ရှမှေ့ာ ပွုံးသညျ ။
အဖကေို့ ကွညျ့လိုကျရငျ စိတျညဈစရာ စိတျပငျပနျးစရာမရှိသလိုပဲ ။ နောကျပွီး ထူးဆနျးတာက ဖဖေဟော
ဘယျတော့မှ နထေိုငျမကောငျးဘူးဆိုတာ မရှိသလိုဘဲ။
အမွဲတမျး အလုပျပဲ လုပျနတေယျ ။ နပေူကွဲကွဲထဲမှာ ။
မိုးရာသီ ဆိုရငျလညျး မိုးရတှေထေဲမှာ ။ ဆောငျးရာသီဆိုရငျလညျး အအေေးခမျြးခမျြး ခိုကျခိုကျတုနျနတေဲ့ အခြိနျမှာ အကငြ်ျီစှပျကြှယျ အဖွူ လကျပွတျနှငျ့အမွဲ အလုပျလုပျနတေတျတယျ ။
တဈနေ့ ကြှနျမ အိမျပွနျလာရငျး လမျးမှာစဉျးစားမိသညျ။
” ငါတောငျ ဆယျတနျးစာမေးပှဲပွီးပွီဘဲ ။
အဖနှေငျ့ စကားမပွောရတာ ။ လြှောကျမသှားရတာ အတျောကွာပွီ ။ အမနှေငျ့ကတော့ တှေုဖွဈတယျ ။
စကားပွောဖွဈတယျ ။ အဖကေတော့ ငါအိပျမှ အိမျပွနျလာတယျ ။ ဒီနကေ့စပွီး အဖကေို့ ငါကောငျးကောငျးစကားပွောလို့ရပွီ ။ လြှောကျသှားမယျ။ လြှောကျလညျမယျ ” အတှေးဖွငျ့ အိမျရောကျလာတော့ အမကေ ငျိုနသေညျ ။ တရှိုကျရှိုကျနဲ့ကို ။
” အမေ . . အမေ ဘာဖွဈတာလဲ ။
” သမီး . . ညဉျး . .ညဉျး အဖေ ကားတျိုကျခံရပွီးဆုံးပွီ ။ ”
” ရှငျ ! ” ကြှနျမနားထဲမှာ အဖဆေိုတာ ဆုံးပွီးစကားလုံးဝ မယုံနိုငျဘူး ။ အဖကေ ကားတိုကျခံရတာ ။ မူးပွီးလှဲကတြာတဲ့ ။ လမျးမမှာ မူးပွီးလှဲတုနျးက ကားတှတေကျကွိတျလို့ ။ အပိုငျးပိုငျး ဖွဈသှားပွီတဲ့ ။ ကံဆိုးလိုကျတဲ့ ကြှနျမတို့ အဖေ။
ညရောကျတော့ အမေ က ပဈတိုငျးထောငျ ဖိုးဝရုပျ အရုပျလေးကို ယူလာသညျ ။ အမကေပွောတယျ ။
” သမီး နငျ့အဖကေ ဟော့ဒီ အရုပျလေးကို ညတျိုငျး
ပိုကျဆံလေးတှေ ထညျ့ထညျ့ပေးတယျ ။
အဲဒီအရုပျလေးကို တယုတယ သူမွတျနိုးတယျ ။
ဒီထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာတောငျ သူကလှဲပွီး အမကေိုယျ့တောငျ မပွောပွဘူး ။ အခု ဒီထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာ အမတေို့ တှေ ဖောကျကွညျ့ရအောငျ ”
ခှမျးခနဲ ခှဲပဈလိုကျသညျ ။ ကြှနျမက စိတျဝငျစားစှာကွညျ့နမေိသညျ ။ပဈတိုငျးထောငျ အရုပျလေးကှဲသှားတော့ အထဲထဲမှာ ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီးဘဲ . .နောကျပွီး စာတဈစောငျပါတှေုတယျ ။ စာတဈစောငျကို အမကေ ကောကျကာငငျကာ ယူဖတျလိုကျသညျ ။
အိုစာဖတျလိုကျတာနဲ့ မမေေ့ မကျြဝနျးတှေ မဟားတအားစိုလာပွီး စာတောငျဆကျမဖတျနိုငျတော့ဘူး ။ ငိုကွီးခကျြမဖွငျ့ ငိုခတြော့သညျ ။ အမကေို့ ကွညျ့ပွီး ကြှနျမလညျး လနျ့ထိတျကာ လကျထဲကစာကို ဆှဲယူပွီး ဖတျလိုကျသညျ ။
” သမီး . . အဖေ သမီးကို ခဈြတယျ ။ အရမျးခဈြတယျ။
အရမျးခဈြလို့လညျး ငှတှေစေုထားတယျ ။
အဲဒီငှတှေကေဟော့ဒီက ငါ့သမီးလေး တဈနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျမှာ မင်ျဂလာဆောငျမယျ ။ လကျထပျတဲ့ အခြိနျကရြငျ သုံးဖို့ပါ ။
အဖလေို့ ကူလီသမားတဈယောကျဟာဆိုရငျ သမီးလေးအတှကျ အရှကျရစမှော အဖသေိပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ဖဖေေ အဲဒီမင်ျဂလာပှဲကို မတကျရောကျတော့ဘူး
သမီး ။ မမွငျကှယျရာ တဈထောငျ့တဈနရောကဘဲ ဝမျးသာပီတိနဲ့ အဖေ လကျခုပျတီးနမှောပါ ။ အဖမေကျြရညျတှဖွေငျ့ ပွုံးပွီး ကနြေပျနမှောပါကှယျ ။
ဖဖေလေို လူရာမဝငျတဲ့ အဖေ့ ဘယျမှာလဲလို့ သားရှငျ ဘကျက မေးလာရငျ ။
ဖဖေဟော အစကကွီးတညျးက သသှေားခဲ့ပါပွီးလို့ ပွောလိုကျပါကှယျ ။
ငါသမီးလေးလို ရုပျခြော ပညာတတျ လေးရဲ့ အဖဖွေဈဖို့ မထိုကျတနျဘူး ။ သမီးလေးကို လညျး အရှကျမရစခေငျြပါဘူး ။ ဖဖေဟောဆိုရငျဖွငျ့ အဖလေို့ မချေါထိုကျတဲ့လူတဈယောကျပါ ။ အဖကွေ့ောငျ့ ငါ့သမီးလေး အရှကျရ
မှာ အဖမေလိုလားဘူး။ ဒါကွောငျ့ အဖပေိုကျဆံတှထေားခဲ့မယျနျော ။ နောကျပွီး ဒီစုဗူးလေး ဖောကျတဲ့ အဲအခြိနျဟာ မင်ျဂလာပှဲကငျြးပ ဖို့ တဈရကျအလိုဆိုတာဖဖေသေိတယျ ။ အဖလေညျး ရှိမှာ မဟုတျတော့ဘူး ။
သမီးလေး မမွငျကှယျရာတဈနရောသှားပွီး သှားရှောငျနမှောပါ ။ သမီးကို ခဈြခွငျးမြားစှာဖွငျ့ ဖဖေေ ”
စာဆုံးသှားတော့ မကျြရညျတှဟော မဖိတျချေါဘဲပါးပျေါသို့ စီးကလြာသညျ ။ အဖရေဲ့မတ်ေတာကို ခံစားရငျးအသံတောငျ မထှကျနိုငျလောကျအောငျ သမီးဖွဈသူကတရှိုကျရှိုကျငိုနမေိသညျ ။
ဖဖေကေို့ ကြောငျးမလာခိုငျးတဲ့ ကြှနျမ ။ ကြောငျးလာရငျအရှကျရပါတယျတဲ့ ။ ပငျပငျပနျးပနျး နပေူကွဲထဲထီးမဆောငျး ဘာမဆောငျးဖွငျ့ တကူတကမုနျ့ဖိုးလာပေးတဲ့ ဖဖေကျေို့ မှ ကြှနျမ ဟာ အငျမတနျမှမိုကျမဲလှနျးလှစှာဖွငျ့ နှငျထုတျခဲ့မိတယျ ။ နောငျတရပါတယျ ။ အရမျးကို နောငျတရပါတယျ ။ ဘာ ။ တဈထောငျတနျက စုတျနလေို့ စားလို့ မရမှာစိုးလို့ လဲခိုငျးခဲ့တဲ့ ကြှနျမ ။ အခြိနျတိုငျး အားရငျ အလုပျပတျတကုတျကုတျလုပျနရေတာလဲ သိပွီ ။ ဘာလို့ နမေကောငျးရငျ နကေောငျးပါတယျဆိုတာလညျး သိပွီ။
ရာသီတှအေလီလီပွောငျးသှားလညျး မပငျမပနျး အလုပျတှေ လုပျတာလညျး သိပွီ ။ တဈနလေုံ့းညောငျးနရေတာ ဘာကွောငျ့လဲ အခုသိပွီ ။ ဖဖေမှေ့ာ ဝတျစရာမရှိတာ အခုသိပွီ ။ အကငြ်ျီသဈတဈစုံတောငျ မဝယျဘဲနခေဲ့တာ ရငျထုနာလိုကျတာရှငျ ။ ငါ့အတှကျ ။ ငါ့အတှကျအရာအားလုံးကို သူ့သမီးဖွဈတဲ့ ငါ့အတှကျပေးဆပျခဲ့တာပါလား ။ ဖဖေရေယျ တောငျးပနျပါတယျ ။ အစက အဲလိုမှနျး မသိလို့ ပွောမိတာပါ ။
ဖဖေဟော အဖခေျေါထိုကျတဲ့ ဖခငျကောငျတဈယောကျပါလောကမှာ ဖခငျတှရေဲ့မတ်ေတာဟာ အပွငျပနျးဝတ်ထုတှထေကျသာပါတယျဆိုတာ အခု သမီးကောငျးကောငျးသိလိုကျရပါပွီ ။ သမီးလိုကျရတဲ့ အခြိနျကလညျး အရမျးနောကျကသြှားပွီ ။ စောစောသိခဲ့ရငျ ဖဖေေ ကြောငျးလာတာလညျး မငွူစူတော့ဘူး ။ ဒါငါ့အဖလေို့လညျး အမြားမွငျမှာ အျောပွောရမှာလညျး မရှကျတော့ဘူး ။
ဖဖေကေို နှငျးပေးဖို့ နှိပျပေးဖို့လညျး မဖွဈနိုငျတော့ဘူး ။
ဖဖေရေဲ့ စုတျပွတျသကျတဲ့ အကငြ်ျီလေးတှေ ရှထေညျတှထေကျ တနျဖိုးကွီးတယျဆိုတာ သမီးသိလိုကျရပွီ ။
ဖဖေေ ကို ပိုငျဆိုငျရတာဟာ လောကမှာ အကွီးမားဆုံးသော ဆုလာဘျကွီးတဈခုဆိုတာ သမီးကောငျးကောငျးသိလိုကျပါပွီဆိုကာ ။ ငိုသံပါပါ လှိုကျလှိုကျဝဲဝဲဖွငျ့ ” အဖေ ” လို့ အကယျြအျောချေါလိုကျမိပါတော့သညျ ။
Message. . ** ဖခငျဆိုတာ သားသမီးတှကေို ခဈြပါ
သညျ ။ သို့သျော ထုတျမခဈြပွတတျ
အသကျတောငျ ပေးဖို့ ဝနျမလေးဘူး။
ထားတာကို စဉျးစားပွီး လုပျပေးထား
ဘုရားရှင်၏ အံ့ဖွယ် ( ၁၈ ) ပါး
အသံဝင်၊အသံမထွက်သူများအတွက် မုန်လာဥဖြူ ၏ အံ့ဖွယ်အစွမ်း